Exodus 33 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
33 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔfa nnipa a wudii wɔn anim fii Egypt+ asase so no na munsim nkɔ asase a mekaa Abraham, Isak, ne Yakob ntam sɛ, ‘W’asefo na mede bɛma wɔn’+ no so. 2 Mɛma me bɔfo adi w’anim+ akotu Kanaanfo, Amorifo, Hitifo, Perisifo, Hiwifo, ne Yebusifo.+ 3 Monkɔ asase a nufusu ne ɛwo sen wɔ so+ no so, na esiane sɛ mo kɔn asen+ nti, me de, me ne mo renkɔ na mankunkum mo ɔkwan no so.”+ 4 Bere a ɔman no tee asɛnnennen yi no, ɛyɛɛ wɔn yaw na wodii awerɛhow,+ na wɔn mu biara anhyɛ n’agude. 5 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Israelfo no sɛ, ‘Moyɛ ɔman a mo kɔn asen.+ Metumi aba mo mu seesei ara+ abɛsɛe mo nyinaa. Enti munyi agude a mode ahyehyɛ mo ho no, na mehu nea mɛyɛ mo.’”+ 6 Na efi Bepɔw Horeb+ ho ara, Israelfo fii ase yiyii wɔn ho agude nyinaa. 7 Afei Mose yii ne ntamadan no de kɔɔ nsraban no akyi nohoa, na ɔfrɛɛ no ahyiae ntamadan. Enti sɛ obi pɛ sɛ obisa+ Yehowa hɔ biribi a, na ɔkɔ ahyiae ntamadan no mu wɔ nsraban no akyi. 8 Na sɛ Mose fi adi sɛ ɔrekɔ ntamadan no mu a, nkurɔfo no mu biara sɔre+ gyina hɔ, na wogyinagyina wɔn ntamadan anim hwɛ Mose atiko kosi sɛ obewura ntamadan no mu. 9 Na sɛ Mose wura ntamadan no mu a, omununkum dum+ no begyina ntamadan no ano, na Onyankopɔn ne Mose kasa.+ 10 Enti sɛ nkurɔfo no nyinaa hu omununkum dum+ no sɛ egyina ntamadan no ano a, obiara sɔre bɔ ne mu ase wɔ n’ankasa ntamadan ano.+ 11 Yehowa ne Mose kasae anim ne anim+ te sɛ nea obi ne ne yɔnko kasa. Na sɛ ɔsan kɔ nsraban no mu a, ne somfo+ Yosua a ɔyɛ Nun ba+ no de, omfi ntamadan no mu. 12 Afei Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Woka kyerɛɛ me sɛ, ‘Di nkurɔfo yi anim,’ nanso wonkyerɛɛ me nea me ne no bɛkɔ. Na w’ankasa woka sɛ, ‘Mede wo din nim wo,+ na woanya m’anim dom.’ 13 Na sɛ manya w’anim dom+ a, mesrɛ wo ma minhu w’akwan,+ na ama mahu wo na makɔ so anya w’anim dom. Na kae sɛ ɔman yi yɛ wo man.”+ 14 Enti ɔkae sɛ: “Me ara me ne wo bɛkɔ,+ na mɛma woahome.”+ 15 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wo ara wo ne yɛn renkɔ a, ɛnde nyi yɛn mfi ha. 16 Na sɛ wo ne yɛn ankɔ+ a, ɛbɛyɛ dɛn na wobehu sɛ me ne wo nkurɔfo yi anya w’anim dom? Hwɛ, ɛnyɛ eyi na ɛbɛma me ne wo nkurɔfo yi ada nsow wɔ nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa ho?”+ 17 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Nea woaka yi nso mɛyɛ,+ efisɛ woanya m’anim dom, na mede wo din nim wo.” 18 Ɛnna Mose kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma minhu w’anuonyam.”+ 19 Ɛnna ɔkae sɛ: “Mɛma wode w’ani ahu+ me papayɛ nyinaa, na mɛbɔ Yehowa din wɔ w’anim.+ Na nea mehu no mmɔbɔ no, ɔno ara na mehu no mmɔbɔ, na nea me yam bɛhyehye me ama no no, ɔno ara na me yam bɛhyehye me ama no.”+ 20 Ɔde kaa ho sɛ: “Worentumi nhu m’anim, efisɛ onipa biara renhu m’anim nnya nkwa.”+ 21 Yehowa kae bio sɛ: “Mewɔ baabi wɔ ha; begyina ɔbotan yi so. 22 Na sɛ m’anuonyam retwam a, mede wo bɛhyɛ tokuru mu wɔ ɔbotan yi mu, na mede me nsa bɛkata wo so akosi sɛ metwam akɔ. 23 Ɛno akyi no meyi me nsa, na wubehu m’akyi. Na m’anim de, worenhu.”+